ဂျပန်အစိုးရမှ ပညာသင်ဆုပေးရေးစီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဂျပန်ယန်း သန်း ၆၂၀ မြန်မာကို အကူအညီအပေး
ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရမှ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပညာသင်ဆုပေးရေးစီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်ရန် မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသို့ ဂျပန်ယန်း သန်း ၆၂၀ အကူအညီပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရမှ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပညာသင်ဆုပေးရေးစီမံချက် အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဂျပန်ယန်း သန်း ၆၂၀ အကူ အညီပေးရေးဆိုင်ရာ စာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုးလဲလှယ်ခြင်း အခမ်းအနားကို ဇွန်လ ၁ ရက်က နေပြည်တော်ရှိ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
စာချွန်လွှာကို စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Ichiro MARUYAMA တို့က လက်မှတ်ရေးထိုး လဲလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီလို လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကြောင့် မြန်မာ-ဂျပန် နှစ်နိုင်ငံအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု ပိုမိုတိုးတက်လာစေမှာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အကူများ ရရှိမည်ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပညာသင်ဆုကို ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပါရဂူဘွဲ့နှင့် မဟာဘွဲ့ရယူလိုတဲ့ လူငယ်နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ပုဂ္ဂလိက အခန်းကဏ္ဍက လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ပေးအပ်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဂပြနျနိုငျငံအစိုးရမှ လူ့စှမျးအားအရငျးအမွဈ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးဆိုငျရာ ပညာသငျဆုပေးရေးစီမံခကျြ အကောငျအထညျဖျောရနျ မွနျမာနိုငျငံတျောအစိုးရသို့ ဂပြနျယနျး သနျး ၆၂၀ အကူအညီပေးခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
ဂပြနျနိုငျငံအစိုးရမှ လူ့စှမျးအားအရငျးအမွဈ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးဆိုငျရာ ပညာသငျဆုပေးရေးစီမံခကျြ အကောငျအထညျဖျောရနျ ဂပြနျယနျး သနျး ၆၂၀ အကူ အညီပေးရေးဆိုငျရာ စာခြှနျလှာလကျမှတျရေးထိုးလဲလှယျခွငျး အခမျးအနားကို ဇှနျလ ၁ ရကျက နပွေညျတျောရှိ စီမံကိနျးနှငျ့ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီးဌာန အစညျးအဝေးခနျးမမှာ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။
စာခြှနျလှာကို စီမံကိနျးနှငျ့ ဘဏ်ဍာရေး ဝနျကွီးဌာန ဒုတိယဝနျကွီး ဦးဆကျအောငျနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဂပြနျသံအမတျကွီး H.E.Mr. Ichiro MARUYAMA တို့က လကျမှတျရေးထိုး လဲလှယျခဲ့ကွပါတယျ။
ဒီလို လကျမှတျရေးထိုးခွငျးကွောငျ့ မွနျမာ-ဂပြနျ နှဈနိုငျငံအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှု ပိုမိုတိုးတကျလာစမှောဖွဈပွီး မွနျမာနိုငျငံ၏ လူ့စှမျးအားအရငျးအမွဈ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ အထောကျအကူမြား ရရှိမညျဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။ လူ့စှမျးအားအရငျးအမွဈ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးဆိုငျရာ ပညာသငျဆုကို ဂပြနျနိုငျငံတှငျ ပါရဂူဘှဲ့နှငျ့ မဟာဘှဲ့ရယူလိုတဲ့ လူငယျနိုငျငံ့ ဝနျထမျးတှနေဲ့ ပုဂ်ဂလိက အခနျးကဏ်ဍက လူငယျခေါငျးဆောငျတှကေို ပေးအပျသှားမယျလို့ သိရပါတယျ။